कसरी टिकटक दृश्य प्राप्त गर्ने - एक जानकारीमूलक गाइड - Winches क्लब
Tik Tok को विचार प्राप्त गर्न वास्तव मा धेरै सजीलो भन्दा तपाइँ सोच्न सक्नुहुन्छ, र त्यहाँ यो गर्न को लागी धेरै तरिकाहरु छन्।. टिक टक समीक्षा स collect्कलन गर्न को लागी बिभिन्न तरीकाहरु मा एक नजर राखौं र तपाइँको टिक टोक समीक्षाहरु लाई बढाउने सबै भन्दा राम्रो तरीका को पहिचान गरौं।
जान्नुहोस् र agrave; तपाइँको श्रोता जान्नुहोस्
सबैभन्दा प्रसिद्ध र अझै पनी स्पष्ट चीजहरु मध्ये एक हो कि केहि रचनाकारहरु लाई दीन को लागी उनीहरुको दर्शक हो।. तपाइँको दर्शकहरु को दृष्टिकोण को बिन्दु को दिल मा छ र सगाईहरु तपाइँ पाउनुहुनेछ। तपाइँको खाता. तेसैले यो जरूरी छ कि तपाइँ कम्तीमा तपाइँको दर्शकहरु संग आफैंलाई परिचित गर्न को लागी तपाइँको सामग्री र agrave लाई अनुकूल गर्न को लागी सक्षम हुन को लागी; के आशा गर्न र agrave; तपाइँको टिक टक च्यानल मा हेर्नुहोस्। यो तपाइँको दर्शकहरु लाई थाहा पाउन गाह्रो छैन. त्यहाँ धेरै चीजहरु छन् तपाइँ तपाइँको दर्शकहरु लाई राम्रो संग जान्न को लागी गर्न सक्नुहुन्छ. यो गर्न को लागी सबै भन्दा राम्रो तरिका मध्ये एक अनलाइन चुनाव र भोटहरु सञ्चालन गर्न को लागी हो. तिनीहरूले तपाइँलाई गुणस्तर को एक राम्रो सूचक दिन सक्नुहुन्छ। तपाइँको सामग्री प्राप्त गर्ने र के परिवर्तन गर्न को लागी आवश्यक हुन सक्छ; & agrave; भविष्य एक व्यापक वैश्विक दर्शकहरु को लागी सामग्री लाई अधिक आकर्षक बनाउन को लागी.
सहभागी प्रशंसकहरु र तपाइँको प्रशंसकहरु संग प्रश्न र उत्तर को अतिरिक्त, टिक टोक विश्लेषण तपाइँको समग्र प्रदर्शन को आकलन गर्न को लागी अर्को महान तरीका हो. तपाइँको समग्र प्रदर्शन को मूल्यांकन आवश्यक छ, किनभने यदि तपाइँ छैन, तपाइँको खाता आकर्षक नहुन सक्छ र धेरै मानिसहरु लाई निकट भविष्य मा सम्पर्क गरीरहेको हुन सक्दैन।
TikTok ले पोस्ट साझा गर्नुभयो (@टिक टक) मा Jul 7, 2020 at 12:00PM PDT
नयाँ सामग्री विचारहरु पत्ता लगाउनुहोस्
तपाइँको दर्शकहरु लाई थाहा पाउन को लागी, यो पनि नयाँ सामग्री विचारहरु संग आउन को लागी महत्वपूर्ण छ. नयाँ सामग्री विचारहरु खोज्न को लागी तपाइँको टिक टोक च्यानल लाई अधिक आकर्षक बनाउन को लागी एक महान तरीका हो, त्यसैले, मानिसहरुलाई प्रोत्साहित गर्न र agrave; यो भ्रमण गर्नुहोस्. यो याद गर्न आवश्यक छ कि जब नयाँ सामग्री विचारहरु को लागी खोज, तपाइँ कहिल्यै सीधा एक प्रतिलिपि गर्नु हुँदैन। एक भाइरल प्रवृत्ति वा स्किट को आधार मा तपाइँको आफ्नै सामग्री बनाउन को लागी प्रयास गर्नुहोस्, एक तरीकाले र agrave; मात्र जोड्नु हुँदैन र agrave; ट्रेन्डिंग वा भाइरल के आधारमा एउटै सामान्य सामग्री पोस्ट गर्ने अन्य मानिसहरुको जन. रिसाइक्लि or वा सामग्री प्रतिलिपि गर्न प्रतिबन्ध लगाउन वा केहि हद सम्म तपाइँको खाता प्रतिबन्धित हुन सक्छ यदि यो निर्धारित गरीएको छ कि तपाइँको सामग्री मौलिक छैन
जब तपाइँ हुनुहुन्छ नयाँ सामग्री विचारहरु को लागी प्रेरणा को लागी हेर्दै, किन यसको बारेमा कुरा नगर्नुहोस् र agrave; तिम्रो साथीहरु ? तपाइँ साथीहरु प्रेरणा वा जानकारी को एक महान स्रोत हुन सक्छ यदि तपाइँ & agrave को लागी खोज्दै हुनुहुन्छ; एक रोचक र मनमोहक टिकटोक सिर्जना गर्नुहोस्. त्यो भन्दा माथि, अन्य सामाजिक मिडिया च्यानल बाहिर जाँच गर्ने प्रयास गर्नुहोस्. बाहेक, अन्य सामाजिक मिडिया को विश्लेषण तपाइँ सामग्री को कस्तो प्रकार को तपाइँ निकट भविष्य मा बनाउन चाहानुहुन्छ र यो कसरी प्रकाशित गर्नु पर्छ को एक राम्रो सिंहावलोकन दिनेछ;. Tik Tok मा धेरै मानिसहरु को लागी नयाँ सामग्री विचारहरु खोज्न तर्कसंगत एप को सबैभन्दा कठिन भागहरु मध्ये एक हो।. यो हो किनकि त्यहाँ धेरै मानिसहरु एप को उपयोग गरीरहेका छन् कि यो गाह्रो हुन सक्छ अद्वितीय र मूल धेरै छिटो हुन सक्छ, कम्तिमा होइन & agrave; ठूलो मात्रा.
टिक टोक एक अभिनव प्लेटफर्म हो जसले आफ्ना प्रयोगकर्ताहरुलाई नयाँ र आकर्षक सामग्री बनाउन को लागी चुनौती दिन्छ समाज. यदि तपाइँ तपाइँको आफ्नै सामग्री बनाउन को लागी योजना बनाउनुहुन्छ, यो तल संक्षेप र यो तल लेख्न एक महान तरीका हो तपाइँको विचारहरु लाई बचाउन र कागज मा उनीहरुलाई तल लेख्नुहोस्. यो तपाइँ आकर्षक सामग्री बनाउन को लागी एक धेरै राम्रो मौका दिन्छ।
सूचित रहनुहोस् & oacute;
सबै भन्दा राम्रो तरिका मध्ये एक, सबैभन्दा सुसंगत र कुशल, Tik Tok मा अधिक राय प्राप्त गर्न को लागी तपाइँको प्लेटफर्म थाहा छ. यो महत्वपूर्ण हुन सक्छ नवीनतम समाचार र अपडेट को abreast राख्न। दिन, विशेष गरी यदि महत्वपूर्ण परिवर्तन गरीन्छ आवेदन वा यदि परिवर्तन तपाइँको खाता लाई असर गर्ने सम्भावना छ. यो टिक टक र सबै शर्त र agrave पालन गर्न महत्त्वपूर्ण छ; उसले प्राप्त गरेको दिन, किनभने यो ग्यारेन्टी तपाइँ शर्त र agrave; नियमित दिनहरु. यदि तपाइँ अपडेट र agrave संग मिति सम्म रहनुहुन्न; दिन र साथसाथै सिर्जनाकर्ताहरु, तपाइँ तपाइँको टिक टोक खाता मा कम अन्तरक्रिया देख्न सक्नुहुन्छ. यदि तपाइँ टिक टोक को लागी दिशानिर्देशहरु लाई पालना गर्नुहुन्न भने यो अन्य दण्डहरु को बीच कम वृद्धि को लागी नेतृत्व गर्न सक्छ.
त्यहाँ सूचित रहन को लागी धेरै तरिकाहरु छन्। Tik Tok संग. सब भन्दा सजिलो र सबैभन्दा धेरै समय खपत गर्ने तरिकाहरु मध्ये एक हो र agrave; एक न्यूजलेटर. एक न्यूजलेटर मार्केटि material सामाग्री साथै समाचार र अपडेट समावेश गर्दछ। विरलै दिन… बाहेक, यसले तपाइँलाई अझ राम्रोसँग बुझ्नको लागी अनुमति दिन्छ कि कसरी टिक टकले प्रत्येक बर्ष यति धेरै मानिसहरुलाई आकर्षित गर्दछ. टिक टोक गतिविधिहरु को abreast रहन को लागी, तपाइँ पनि टिक टक मा आफैलाई प्रसिद्ध बनाउन विचार गर्न सक्नुहुन्छ. जे भएपनि, टिकटक मा सामाजिक सञ्जाल ताराहरु प्रदर्शन गरे राम्रो आय यो र agrave को लागी धन्यवाद; विज्ञापन र एक खाता वा पर्याप्त खाता खोल्न पछि प्रायोजन, वा उनीहरुको एउटा भिडियो भाइरल भए पछि.
TikTok ले पोस्ट साझा गर्नुभयो (@टिक टक) मा Mar 6, 2020 at 3:00PM PST
अद्वितीय अनुदेशात्मक भिडियो बनाउनुहोस्
मूल निर्देशात्मक भिडियो बनाउन धेरै महत्त्वपूर्ण छ. साँच्चै, एक जानकारीमूलक भिडियो अधिक एक रोचक परिणाम दिन को लागी सम्भव छ र तपाइँ सबै को लागी अधिक सुलभ बनाउनुहुन्छ। सबै। जब तपाइँ भिडियो को बारे मा सोच्नुहुन्छ हासिल, & agrave; वर्तमान समय, सूचनात्मक भ्रमणहरु थोरै दुर्लभ छन्. यो निर्णय गरिएको छ; तथ्य यो हो कि टिक टोक मा भिडियोहरु को अधिकांश संगीत भिडियो म्याश अप मा आधारित छन्. जे होस्, आवेदन तथ्या increasingly्क बढ्दो संकेत गर्दछ कि प्रयोगकर्ता एक जनसांख्यिकीय समूह हो.
एक अद्वितीय शैक्षिक भिडियो तपाइँ उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ को एक उदाहरण कसरी एक भिडियो खेल को लागी मार्गदर्शन गर्न को लागी हो. उदाहरण को लागी, तपाइँ केहि सेकेन्ड को लागी खेलमा एक अद्वितीय सुविधा देखाउन सक्नुहुन्छ. यो एक महान तरिका हो तपाइँको सामग्री मा रुचि राख्ने मानिसहरुलाई र के प्रसारण हुन्छ। सामान्य मा तपाइँको च्यानल मा.
अन्तिम मा, टिक टक को सामग्री को बारे मा, यो याद गर्न को लागी महत्वपूर्ण छ कि मानिसहरु छिटो, आकर्षक सामग्री हो कि उनीहरुलाई केहि सिकाउँछ वा मनोरन्जन मूल्य छ. मनोरञ्जन तपाइँको Tik Tok को सामग्री को समृद्ध गर्न को लागी अर्को महान तरीका हो, यद्यपि यसो भने, तपाइँ ध्यान दिनुपर्छ कि सूचनात्मक भिडियो र सामग्री टिक टोक मा अधिक विचार प्राप्त गर्न को लागी एक महान तरीका हो, किनकि यो एक क्षेत्र हो जुन वास्तव मा गरिएको छैन। अन्वेषण गरियो Tik Tok को सबैभन्दा राम्रो ज्ञात र लोकप्रिय प्रभावकारहरु द्वारा।
तपाइँको भिडियो हास्य बनाउनुहोस्
टिक टोक अद्वितीय सामग्री को जन्मस्थान हो, हास्यास्पद र भावनात्मक. यो एक समय मा एक पटक जान दिनुहोस् र तपाइँको भिडियो को केहि हास्यास्पद बनाउन को लागी महत्वपूर्ण छ।. यो सधैं तपाइँको भिडियो हास्यास्पद बनाउन सावधान योजना बनाउन को लागी आवश्यक छैन. यसमा केहि रमाईलो क्याप्शन थप्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाइँको भिडियोहरु, साथै उपयुक्त संगीत. तपाइँ एक मिनी स्किट वा स्किट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ जुन चीजहरु को एक किसिम को शामिल गरीन्छ। कारक र विचारहरु. हास्यास्पद हुनु धेरै सोच्दैन. एक हास्यास्पद भिडियो बनाउन को लागी एक द्रुत तरीका एक शरारत खेल्न को लागी हुनेछ। एउटा साथी. Tik Tok मा सानो मजाक विशेष गरी लोकप्रिय छ. बस क्यामेरा सुझाव र प्रविधि जस्तै.
टिक टक र agrave को बारे मा कुरा गर्नुहोस्; तपाइँका केहि साथीहरु. प्राय, मानिसहरुको टिक टक को बिभिन्न प्रकार को बारे मा फरक राय छ र के साँचो मान्न सकिन्छ। अनुप्रयोग मा हास्यास्पद रूपमा. तेसैले यो महत्वपूर्ण छ कि तपाइँ सम्भव भए बोल्नुहोस् र agrave; अन्य मानिसहरु बाट तपाइँ जान्दछन् कि तपाइँ सामग्री र उत्पादन को केहि मा राय र राय प्राप्त गर्न को लागी थाहा छ कि यो हास्यास्पद वा नहुन सक्छ.
बेलाबेलामा, रमाईलो भिडियोहरु को केहि बनाईएको धेरै सरल र आधारभूत अवधारणाहरु बाट शुरू गर्नुहोस्. यसैले, एक सानो योजना र रचनात्मकता तपाइँलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ र agrave; Tik Tok मा धेरै दृश्य र आदानप्रदान उत्पन्न. जब तपाइँ खोज्दै हुनुहुन्छ र agrave; तपाइँको भिडियो रमाईलो बनाउनुहोस्, यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाइँ जान्दछन् कि तपाइँ कुन दर्शकहरुलाई लक्षित गर्दै हुनुहुन्छ, car connaître votre public signifie que vous pouvez cibler des secteurs bien précis.
इन्स्टाग्राममा अर्गानिक रूपमा फलोअरहरूको संख्या कसरी बढाउने : 2021 को लागि 23 विधिहरू
तपाईंको आईफोनमा इन्स्टाग्राम भिडियोहरू कसरी डाउनलोड गर्ने :3विधि र अनुप्रयोगहरू
अघिल्लो लेख२०२० मा कसरी एक राम्रो टिक टोक प्रवृत्ति सिर्जना गर्ने
अर्को लेखIGTV किनमेल अब इन्स्टाग्राम मा उपलब्ध छ